(1989-07-16) ဇူလိုင် ၁၆၊ ၁၉၈၉ (အသက် ၃၂)
၂၀၁၅-၂၀၁၆၊ ရုပ်ရှင်လောကတွင် အောင်မြင်မှုရခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ထို့နောက် သူသည် လီဗြောင်ဟွန်း၊ ကန်ဒုံဝန်တို့နှင့် အပြိုင် မာစတာ ရုပ်ရှင်တွင် သရုပ်ဆောင်ရာ၊  ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ ၌ ရုံတင်သော ၎င်းရုပ်ရှင်သည် တောင်ကိုရီးယားတွင် ၂၀၁၆ အရောင်းရဆုံး ရုပ်ရှင်၌ နံပါတ် ၁၁ ချိတ်လေသည်။ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ အီတလီ၊ ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ စင်္ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အခြား နိုင်ငံများ ပါဝင်သော ၃၁ နိုင်ငံသို့ ရောင်းချခဲ့ရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇ အထိ၊ မာစတာသည် တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇယားတွင် ဒေါ်လာ ၄၉.၈၁ သန်း မြတ်စွန်းပြီး၊ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကောင်စီ သတင်းအရ၊ လက်မှတ်ပေါင်း ၇.၁၄ သန်း ရောင်းချခဲ့ပြီဟု ဆိုသည်။
↑ "ฟินยกประเทศ "ช่อง 8" คว้า "อันคอนโทรลเลบลี ฟอนด์" ออนแอร์พร้อมเกาหลีครั้งแรกในประเทศไทย"[လင့်ခ်သေ]. starenews (in Thai). June 16, 2016. Retrieved June 17, 2016.
↑ "Uncontrollably Fond (Lightly, Ardently) - 함부로 애틋하게 - Watch Full Episodes Free on DramaFever"[လင့်ခ်သေ]. Dramafever.com. Retrieved 2016-12-20.
↑ Choi၊ EunHwa (22 October 2013)။ Lee Jong Suk says Kim Woo Bin is the Only Friend He Can Lean On။ 8 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Grace Danbi (15 December 2013)။ [Star of the Week Kim Woo Bin's Past, Present and Future Best Friends]။ 18 December 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kwon၊ Soo Bin (21 December 2013)။ Kim Woo Bin Says Lee Jong Suk is NotaRival, ButaBeloved Friend။ Newsen။5April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Grace Danbi (25 June 2013)။ Kim Woo Bin to Appear in 2EYES' Drama MV of Don't Mess With Me။ enewsWorld။ 30 July 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2013-08-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Choi၊ Eun-hwa (1 July 2013)။ Kim Woo Bin Appears in New Teasers for 2EYES' Don't Mess With Me MV။ enewsWorld။ 2013-08-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကင်ဝူဘင်&oldid=705009" မှ ရယူရန်